जीवन रेग्मी भन्छन : सुदुरपश्चिमबाट यहाँ आउनु नै मेरो ठुला उपलब्धी  BikashNews
२०७५ असोज १२ गते १६:५१ विकासन्युज
जीवन रेग्मी एसएलसीपछी परिवारसँग बस्न धनगढी झरे। जीवन पेसाले शिक्षक हुन् । अहिले उनी मिस्टर नेपालमा टप १८ मा परेका छन । सुदुरपश्चिम जस्तो ठाउँबाट आफुलाई चिनाउन पाउँदा उनी आफुलाई गर्व महसुस गर्छन्। सुदुरपश्चिमको जीवन कसरी मिस्टर नेपालमा आईपुगे, यही बिषयलाई लिएर बिकासन्युजका लागि डोमी शेर्पाले जीवनसंग गरेको गरेको कुराकानी।
मिस्टर नेपालको यात्रा कसरी सुरु भयो ?
मलाई यसमा ईन्ट्रेस्ट जागेको आज भन्दा २ बर्ष अगाडिदेखि हो। एकदिन मैले वेबसर्फिङ गर्दा मिस्टर नेपालको पेज लाइक गरेको थिएँ। त्यस पेज हेर्दा मलाई कार्यक्रम एकदमै आकर्षक लाग्यो। उक्त कार्यक्रम एक्स्पोज नेपाल संस्थाले चलाएको रहेछ। मैले तुरुन्त त्यहाँ भएको नम्बरमा सम्पर्क गरे। मैले यस बिषयलाई लिएर आफ्नो जिज्ञासा राख्दा काठमाडौं आएको बेला मलाई भेट्नुहोस् भन्नुभयो। म अस्ती भर्खर काठमाडौ आउँदा उहाँलाई भेटे। उहाँसँग मैले भेटेर कुरा गर्दा सर मेरो मोडल जस्तो बडी छैन भन्दा उहाँले जीवन जी यो बडी बिल्डिङ सो होईन, ट्यालेन्ट सो हो भनेर भन्नुभयो। कर्णाली पारी, अथवा पुर्व भन्दा उता पनि मोड्लिङ गर्ने मानिसहरु छन्, क्षमता भएको मानिसहरु छन। उनिहरुले प्लेटफर्म अभावको कारण पनि त्यहीँ थन्किएर बसेका छन्। सुदुरपश्चिममा पनि यस क्षेत्रका साथै धेरै क्षेत्रमा काम लाग्ने योग्य मानिसहरु छन् भनेर प्रमाणित गर्न म यहाँ आएको हो ।
मिस्टर नेपालको ट्रेनिङमा के के सिकाइन्छन् ?
ट्रेनिङमा धेरै कुराहरु सिकाईन्छ। यहाँ र्याम्प वाल्कदेखी लिएर कसरी बोल्न, कसरी आफ्नी शब्दहरु राख्ने, मान्छेको ठुलो जमातलाई कसरी सामना गर्ने , आफुलाई कसरी फिट राख्ने, कसरी आफुलाई राम्रो देखाउने र कसरी पर्सान्यालिटी राम्रो बनाउने कुराहरु यहाँ सिकाइन्छ।
मिस्टर नेपाल जित्छु भन्ने आशा कत्तिको छ ?
मिस्टर नेपालको टाईटल लिएर जाने ठुलो ईच्छा छ । आफ्नो बेस्ट दिइरहेको छु। अहिले हामी देशभरीबाट फाईनलको लागि १८ जना छौं। काठमाडौँ मात्र नभएर धादिङ, पोखर, दमौलीबाट पनि सहभागीहरु हुनुहुन्छ। सबैजनासँग आ–आफ्नो प्रतिभा रहेको छ। प्रतियोगिता हो सबैलाई जित्छु भन्ने भाव हुन्छ। जित्छु भनेर आएका हुन्छन्। सबैजना हेरौ समयले कत्तिको साथ दिन्छ।
तपाइसंग मिस्टर नेपालमा हुनुपर्ने के गुण छ ?
मिस्टर नेपाल हुनुका लागि सबैभन्दा पहिला पब्लिक स्पिकिङमा एकदम राम्रो हुन जरुरी रहेछ । किनभने भोली मिस्टर नेपालको टाईटल जितिसकेपछी हामीले आफ्नो देशलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुन्छ र मलाई पब्लिक स्पिकिङमा म राम्रो छु जस्तो लाग्छ। म खेलकुदमा र गजलमा पनि रुची राख्ने हुनाले यस टाईटलको हकदार छु जस्तो लाग्छ। म उसु खेलाडी पनि हुँ। मैले ५ बर्षसम्म उसु खेले। छैठौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको समय मेरो खुट्टा फ्र्याकचर भयो जसको कारणले गर्दा मैले खेल्न पाईन। राम्रोसँग निरन्तरता दिन नपाए पनि म खेलिरहेको हुन्छु। यसबाहेक मलाई फुट्बल,भलिबल पनि खेल्छु।
तपाईं आफुले आफुलाई कसरी चिनाउन चाहनुहुन्छ ?
मेरो मोड्लिङप्रति रुची एक्कासी २ बर्ष अगाडी आएको हो। देशको लागि केही काम गर्ने अवसर पाईन्छ भन्ने हो। भोली यदी मिस्टर नेपाल बाहिरा जानु पर्‍यो भने आफ्नो राष्ट्रको लागि केही गर्न सकिन्छ। देशका लागि गर्न पाउनु एकदम ठुलो कुरा हो। यही कारणले पनि मेरो रुची यसप्रति बढेको हो।
मिस्टर नेपाल जित्नु भएन भने के गर्नुहुन्छ ?
टाईटल यदी जितिएन भने ठिकै छ । जीवन सिक्ने प्रक्रिया हो। मैले यहाँ नजिते पनि कम्तीमा पनि यो एक महिनाको अवधीमा कम्तिमा पनि २० २५ जना राम्रो साथी भेट्टाए पहिलो कुरा। धेरै कुरा सिकियो जस्तै र्याम्प वाक। मलाई यसको बारेमा चाँही केही पनि थाहा थिएन। मोडलिङमा चाहिने त्यो रहेछ र अर्को भनेको कन्फिडेण्स लेभल जसको ममा धेरै बिकास भएको छ। सेल्फ ग्रुमिङको धेरै कुरा सिकियो। जे होस् जीवनमा काम लाग्ने धेरै कुरा सिकियो। यही कुरालाई आगामी दिनमा मेरो क्षेत्रबाट यसमा आउनुहुने काउन्सील गर्न सकिन्छ। मैले त्यो चाँही गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ। टाईटल नजिते पनि सुदुरपश्चिमबाट आएर यहाँसम्म आईपुग्नु नै मेरो लागि ठुलो कुरा हो।
तपाईंलाई अहिले सम्मको जिन्दगीले के सिकाएको छ ?
अली दुर्गम ठाउँको मानिसहरु यो त धनगढी बस्छ यसको त घर ठुलो होला है राम्रो होला है भन्छन् । सबै साथीको राम्रो घर हुन्थियो मेरो पनि यस्तै घर भईदिए हुन्थियो जस्तो लाग्थियो मलाई। त्यो समयमा साईकल सबैले चलाऊथे, मैले जस्तोतसो पैसा सबैसँग सापटी मागेर चलाए। त्यसपछी फेरी प्लस टु पढ्न अझै समस्या भयो। कलेज भर्ना गर्दा पैसा पुगेन, सहयोग गर्छु भन्ने साथीले पनि आस मात्रा देखाएर मुख मोडे, तर जसोतसो गरेर अन्त्यमा मैले आफ्नो कलेज भर्ना गरेको थिए। त्यसपछि मलाई पढ्नमा कुनै समस्या भएन, कलेजले मलाई पढ्नमा धेरै सहयोग गरेको छ।